संखुवासभा हत्याकाण्ड: आरोपी युवा सार्वजनिक::Hamro Koshi Awaj / awaz
दाउराको चिर्पटले हिर्काएर ६ जनाको हत्या गरेको स्वीकार, शुरुमा काका र त्यसपछि अन्यको हत्या, दोस्रोदिनदेखि नै उनी नै निगरानीमा, प्रहरी फन्दामा कसरी परे, यस्तो छ नालीबेली
धरानः संखुवासभामा ६ जनाको विभत्स हत्या भएको ६ दिनपछि प्रहरीले हत्या अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लाको चैनपुर नगरपालिकामा पुगेर प्रहरीले आइतबार अभियुक्त सार्वजनिक गरेको हो । चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अभियुक्त सार्वजनिक गरेको छ ।
गत सोमबार ८४ वर्षीय पार्वती कार्की, उनका छोरा ५२ वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की, तेजबहादुरकी श्रीमती ५२ वर्षकै कमला कार्की, ३२ वर्षीय रञ्जना कार्की, ८ वर्षीय विपिन कार्की र पाँच वर्षकी गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो । सोमबार घरभित्र, बाटोमा, बारी र खोल्सामा गरी विभिन्न ४ ठाउँमा ६ वटा शव फेला परेको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले ६ दिनको अनुसन्धानपछि २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो । ‘हत्यामा संलग्न उनै एकजना रहेको पाइयो’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदीले भने, ‘दोस्रोदिनदेखि नै उनी निगरानीमा थिए उनी, उनलाई कतै नजान भनिएको समेत थियो ।’
संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीमबहादुर दाहालले घटनाका अभियुक्त सार्वजनिक गरेर सफलता मिलेको धारणा राखे । अभियुक्तले लगाएको कपडा समेत बरामद गरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार कपडामा रगत लागेको थियो ।
ती युवक मृतक परिवारका १३ दिने नाता पर्ने एकै खलकका हुन् । हत्या गरिएका तेजबहादुरका नातामा उनी भतिजा पर्छन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका छिमेकी नै हुन् । प्रहरकिा अनुसार बिहान करिब साढे ५ बजेतिर घटना भएको थियो ।
चिर्पटले हिर्काएर हत्या
तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर करिब १०० मिटरको फरकमा छ । सोमबार विहान खेताला खोज्न निस्किएका तेजबहादुरलाई बाटोमा कुरेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर हत्या गरेका थिए । तेजबहादुरलाई हत्या गरेको पत्नी कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दौडिँदै गएका थिए । घरनजिकै रहेको खोला छेउमा दुवैलाई उनले चिर्पटले हिर्काएर हत्या गरे ।
शुरुमा काका र त्यसपछि अन्यको हत्या
प्रहरीका अनुसार घटना सोमबार बिहान साढे ५ बजेदेखि ६ बजेको बीचमा भएको थियो । बिहान तेजबहादुर बाटोमा हिँडिरहेका बेला आक्रमण गरेको लोकबहादुरले बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तेजबहादुरको गुहार सुनेर आएका कमला र रञ्जनालाई पनि लोकबहादुरले आक्रमण गरेको बयान दिएको संघीय इकाई प्रहरी कार्यालयका एसपी भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए । त्यसपछि कमला र रञ्जनालाई पछ्याउँदै आएका विपीन र गोमालाई आक्रमण गरेका लोकबहादुरले घरमै गएर पार्वतीको हत्या गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रहरीका अनुसार अनुसार लोकबहादुरले आफूले तेजबहादुरलाई मात्र मार्न चाहेको बयान दिएका छन् । तर घरका अन्य सदस्य पनि आएपछि अरुलाई पनि मार्न बाध्य भएको भनेका छन् । ‘कराउन थालेपछि आत्तिएका उनले घरतिर समेत गएर सबैको हत्या गरेको साविती बयान दिएका छन्’, उनले भने ।
उनले तेजबहादुरका बुवा ९० वर्षीय वृद्ध बौद्धमान कार्की भने जीवित नै भेटिएका थिए । श्रीमतीसहित परिवारका सबै मारिँदा पनि उनले थाहा नपाएको प्रहरीले बताएको छ । बौद्धमानको दृष्टि र श्रव्य शक्ति कमजोर छ । ६ जनाको हत्या गरिसक्दा पनि बौद्धमानले थाहा नपाएपछि उनलाई त्यतिकै छोडिदिएको लोकबहादुर प्रहरीसँग बताएका छन् ।
आँगनबाट दाउरोको चिर्पट टिपेर उनी तेजबहादुरलाई हिर्काउन अगाडि बढेको र बताएका छन् । डिल उक्लिँदै गरेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टाउकोमा प्रहार गरेको उनले बताएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यसरी प्रहार गर्दा तेजबहादुर ढलेपछि उनकी श्रीमती कराउँदै आएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई पनि लोकबहादुरले हिर्काएका थिए । सासु ढलेको देखेपछि बुहारी अगाडि बढ्दा उनलाई पनि हिर्काएको लोकबहादुरले बताएका छन् ।
उनले दुई नातिनातिना दौडादौड गर्दैगर्दा उनीहरूलाई लेखेटी–लखेटी दाउराले हिर्काएका थिए । त्यसपछि उनले घरै पुगेर कुँडो पकाउन आगो फुकिरहेकी ८४ वर्षीया आमा पार्वतालाई हिर्काएका थिए ।
कुँडो पकाएको ठाउँमै पार्वताको शव फेला परेको थियो । पार्वतालाई न्याकेर पहिले उनको टाउको भित्तामा दुई पटक ठोक्काएको र त्यसपछि दाउराले हिर्काएको लोकबहादुरले बताएका छन् ।
कसरी पक्राउ परे लोकबहादुर ?
शुरुमा प्रहरीले मृतक परिवारले झापामा ८० लाखको जग्गा किन्ने सुइँको पाएपछि पैसाको कारण हो कि भनेर अनुसन्धान थाल्यो । तर त्यो फेल भयो । कार्की परिवारको घरभित्र रहेको ४ लाख ७१ हजार नगद र मृतकले लगाएका गरगहना सकुशल भएकाले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान थालेको थियो ।
घरभित्र कुनै पनि छेडछाड नगरेको, अन्य आधुनिक हतियार प्रयोग नगएको र परिवारका एकजनाबाहेक बसै सदस्यको हत्या गरिएको हुनाले कुनै चिने जानेको व्यक्तिबाट नै हत्या भएको हुनसक्ने आशङ्कामा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । त्यस्तै, जसले गर्दा प्रहरीले घटना लुटपाटको लागि नभएको हुनसक्ने प्रारम्भीक निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि प्रहरीले गाउँलेलाई सोधपुछ गर्न थाल्यो । पालैपालो सोधपुछ गर्ने क्रममा लोकबहादुरको बयान फरक फरक आउन थाल्यो । घटनाबारे थाहा पाउने पहिलो व्यक्तिलाई लगातार सोध्दै जाँदा उनैले लगातार बयान फेर्न थालेपछि प्रहरीले लोकबहादुरमाथि निगरानी बढायो । त्यसक्रममा उनको घरभित्र रगत लतपतिएको कपडा भेटिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
प्रहरीले लोकबहादुरमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा शङ्कास्पद गतिविधि देखिएको थियो । उनले आफूले लास देखेको भन्दै कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिएका थिए । तर, उनले जुन ठाउँबाट शव देखेको भनेका थिए त्यस स्थानबाट सहजै लास देखिने अवस्था थिएन । त्यसपछि प्रहरीको आशङ्का थप बलियो बनेको थियो । प्रहरीले उनलाई शुक्रबार राति भने नियन्त्रणमै लिएको थियो ।
निर्दोष देखिनका लागि लोकबहादुरले छिमेकीलाई हत्याको खबर सबैभन्दा पहिले पुरयाएका थिए । तर, लोकबहादुरको घरमा रगत लागेको कपडा र हत्यामा प्रयोग गरिएकोजस्तो देखिने हतियार प्रहरीले फेला पारेपछि उनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
रिसीइवी, आवेग, कुण्ठा आदिका कारण हत्याको रहस्य खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डिएसपी सुवेदी भन्छन्, ‘हत्याको कारण रिसइवी, आवेग, कुण्ठा आदि कारण नै भन्ने खुलेको छ ।’
हत्या भएका कार्की परिवारले आफूलाई हेप्दै आएको र मनमा त्यसको तुस रहिरहेकाले पनि सोही दिन हत्या गरेको प्रहरीलाई उनले बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ । केही दिनअघि अभियुक्तले तेजबहादुर कार्कीकी बुहारीलाई रातिको समयमा फोन गरेका थिए । सो कुराको जानकारी रञ्जनाले आफ्ना ससुरालाई दिएकी थिइन् । त्यसपछि तेजबहादुरले लोकबहादुरलाई हप्काएका थिए । मलाई हप्काउने उसका छोरा विदेशमा भएर पैसा कमायो भनेर हेप्ने गरेको थियो । त्यसैको रिस थियो,’ लोकबहादुरको बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।
तेजबहादुरलाई देख्नेवित्तिकै ‘झोंक’ चलेको लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेजबहादुरले आफूलाई पहिला गालीगलौज गरेको लोकबहादुर सम्झिएको बताएका छन् । त्यसपछि आँगनबाट दाउराको चिर्पट टिपेर उनी तेजबहादुरलाई हिर्काउन अगाडि बढेको बताएका छन् । डिल उक्लिँदै गरेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टाउकोमा प्रहार गरेको बताएका छन् ।
आवेगमा लोकबहादुर एक्लैले तेजबहादुरसहित ६ जनाको ज्यान लिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । हत्या गरिएका तेजबहादुरले ‘हेपेका कारण’ आफूले आवेगमा हत्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेजबहादुरका दुई छोरा विदेशमा छन् । लोकबहादुरलाई आफू विदेश जान नसकेकोमा ‘हिनतावोध’ थियो । स्थानीयहरुका अनुसार तेजबहादुरमा अरुलाई हेप्ने ‘प्रवृत्ति’ थियो । तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन । ‘हेपाइ खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
यसअघि नै मानसिक स्थिति बिग्रिएको थियो, अहिले ठीक
हत्या गर्ने लोकबहादुरले कक्षा ८ सम्म पढेपछि पढ्न छोडेको थिए । छिमेकी चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार घरमा पनि उत्ति काम नगर्ने कार्की मलेसिया र कतार काम गर्न गए पनि वर्षदिन नपुग्दै गाउँमा फर्किदै आएका थिए । ६ वर्ष अगाडि मलेसिया गए पनि १० महिनामा विदेश जाँदाको ऋणसमेत नतिरी फर्किएको थापाको भनाई छ । त्यसको डेढ वर्षपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार पुगे । तर त्यहाँबाट पनि नौ महिना नपुग्दै घर फर्किए ।
मलेसियामा रहँदा मानसिक स्थिति बिग्रिएपछि नेपाल फर्केको स्थानीय बताउँछन् । अहिले ‘ठिकै’ भनिएका लोकबहादुर गाउँमै खेतीपाती गरेर बसिरहेका थिए ।
एक्लैले गरे त सबैको हत्या ?
घटना बिहानकै समयमा भएपनि कसैले देखेको र कराएको आवाजसमेत नसुनेको बयान स्थानीयले दिएका थिए । एकजनाले मात्रै कसरी घटना घटाउन सक्लान् ? यो प्रश्न अहिले उब्जिएको छ । घटनामा कुनै धारिलो तयार प्रयोग नहुनु, मृतकको टाउकोमा सामान्य चोट देखिनु, ६ जनाको शव चार स्थानमा करिब सय मिटर आसपास भेटिनु आदि कारणले एक्लैले यत्रो घटना घटाएको हो भन्नेमा आशङ्का समेत छ । एक्लैले छोटो समयमा यस्तो घटना गर्न नसक्ने प्रहरी अनुसन्धान पनि भन्छ । अन्य व्यक्तिको पनि यस घटनामा संलग्नता हुने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाएको जनाइएको छ ।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतका अनुसार आरोपीले घटना देख्ने सबैलाई मार्ने योजना समेत बनाएको बयानमा खुलाएका छन् । उनले घटनाको वरिपरि भएका सबैलाई मार्ने योजना बनाएको बताएका छन् । ‘मेरो टार्गेट र रिस भनेको काका (तेजबहादुर) प्रतिमात्रै थियो, तर मैले हानेको देखेपछि सबैलाई हानेको हुँ । अरूले देखेको भए अरूलाई पनि हान्थे र मार्थेँ ।’